Amagama Okwelapha Ngezimbuzi
I-Aetiology - Isizathu noma umsuka wesifo.
Ama-amino Acids - Amakhemikhali e-Organic okwenzeka ngokwemvelo ezinhlobonhlobo zezitshalo nezilwane. Ama-amino acids yizona zakhi eziyinhloko zamaprotheni.
I-Anthelmintic - Isidakamizwa esetshenziselwa ukuxosha izibungu noma ama-parasite wangaphakathi - isifo sezulu.
I-Antibiotic - Into ekhishwa yi-micro-organisms noma yokwenziwa (i-penicillin, i-Streptomycin, njll) enekhono lokuvimbela noma lokubhubhisa ezinye izinhlobo ezincane zemvelo.
Ama-antibodies - Izinto ezikhiqizwa ngumzimba njengendlela yokusabela kumagciwane, amabhaktheriya noma ubuthi. Ama-antibodies enza isenzo esithile ngokumelene ne-ejenti ngaphansi kwethonya lawo.
I-Antigen - Into eyoshukumisa ukukhiqizwa kwama-antibodies lapho ifakwa emzimbeni. Imishanguzo iqukethe i-antigens evuselela isilwane ukwakha izifo ezilwa nesifo.
I-Antigen (Ebulawe noma Engasebenzi) - Into eyenza ukuqala kokuqalwa kwama-antibody. Umjovo wesibili udinga izinsuku ezimbalwa noma ngaphezulu emva kokujola kokuqala ukudala isigaba sokukhiqiza i-antibody.
I-Antigen (Ukuphila) - Into evuselela zombili izigaba zokukhiqizwa kwama-antibody.
I-Antiseptic - Ukuvimbela ukukhula kwama-micro-organisms, noma izinto ezivimbela ukukhula okunjalo.
I-Antiserum - I-Serum equkethe ama-antibodies. Ikhiqiza ukuvikelwa okwesikhathi esifushane ngokuvamile amasonto amabili kuya kwamane.
I-Antitoxin - I-Serum equkethe ama-antibodies athile anobuthi.
I-Astringent - Isidakamizwa esivumelanisa izicubu futhi sincishise imfihlo.
I-Atrophy - Ukunciphisa noma ukwehla ngobukhulu besitho, izicubu noma iseli.
Ukulinda - Inqubo yokwehlisa isifo se-virulence noma ukuguqula i-agent eveza izifo ngokuyikhulela komunye umphathi, ngokuvamile ngenhloso yokwenza umgomo.
Umgomo wokuzivikela - Umuthi owenziwe ngezinto eziphilayo usungula ukugula kwesifo esithile.
Amabhaktheriya - Iqembu lezinhlobo ezincane ezine-celled, encane kunazo zonke izitshalo ezivele zikhona.
Bactericidal - Ukuthola indawo yokubulala amabhaktheriya
Ibhaktheriya - Umkhiqizo oqukethe amabhaktheriya aguquliwe noma abulawe, alungele ukusetshenziswa njengomuthi wokugoma.
Biological - Imithi etholakala emthonjeni ophilayo. Ngokujwayelekile esetshenziselwa ukuvimbela izifo (bheka amabhaktheriya, umuthi wokugoma, i-antiserum, i-antitoxin)
Isifo Sokukhusela - Isigungu sesibili noma eziningi esinikezwe ukwandisa ukuphikiswa kwesilwane kwisifo esithile.
I-Caustic Corrosive - i-agent ekwazi ukubhubhisa izicubu eziphilayo.
I-Coccidia - Izilwane ze-Protozoan ezithinta amangqamuzana ahlanganisa indlela yokugaya.
I-Diluent - I-liquid esetshenziselwa ukubuyisela imishanguzo eyomisiwe futhi ukwandise ukuze ivolumu noma iyiphi into.
Umsele - Nika amanzi ngomlomo.
Ama-electrolytes - Amakhemikhali ayenziwe ngokuhlanganiswa kwezinsimbi ezihlukahlukene zamaminerali okusiza ukugcina ukulinganisela komthamo womzimba okulawulwayo
Ukubeletha - Ukukhulelwa (izinsuku ezingu-150 ngembuzi)
Ukushona kwegazi - Ukulahlekelwa kwegazi
Ukungakhulelwe - Ikhono lomzimba ukulwa noma ukunqoba ukutheleleka. Ama-antibodies ayingxenye enkulu ekukhunjweni.
Ukungakhulelwa (Ukutholakala) - Ukumelana nesilwane esasikhona esidlule sinesifo esithathelwanayo.
Ukungakhulelwa Emzimbeni (Okusebenzayo) - Ukungavikeleki lapho izici zokuzivikela ezibhekene nesifo zikhiqizwa ngaphakathi komzimba uqobo.
Ukungakhulelwe (Innate) - Ukulwela (i-genetic) ukumelana nesifo esithathelwanayo.
Ukungakhulelwa (Umama) - Indlela yokuzivikela engapheli ngenxa yezifo zomzimba ezidluliselwa kumama kuya enzalweni. Lokhu kungenziwa ngaphakathi kwesibeletho noma ngokusebenzisa ubisi (ikakhulukazi i-colostrum).
Ukungavikeleki Emzimbeni (Okungahambi kahle) - Ukungakhulelwa emzimbeni ngenxa yokudluliswa kwezici zokuvikela kusuka komunye nomunye. Lokhu kungenziwa ngokuhlakanipha ngokuthola i-serum evela emzimbeni wesigciwane futhi uyijobe kwisilwane esingenasigciwane. Ukuzivikela komzimba kungokwesikhathi esifushane kulinganiswa ngokwezinsuku noma amasonto.
Ukutheleleka - Ukuhlasela okuphumelelayo nokukhula kwama-agent okhiqiza izifo (amabhaktheriya, amagciwane, njll) ezicubu zomzimba.
Ukuvuvukala - Ukusabela okuqondile komzimba ekulimazeni. Ukulimala okunjalo kungenziwa ngenxa yezinsimbi eziphilayo noma ezivela ezinkampanini zamakhemikhali, zamakhemikhali noma zikagesi. Ukuvutha kubonakala ngokubomvu, ubuhlungu, ukushisa nokuvuvukala.
Inoculate - Ukwethula i-immune serum, imithi yokugoma, noma ezinye izinto zokulwa nezifo zokuvimbela, zokunakekela noma zokuhlola.
Inambuzane - I-agent ebulala izinambuzane.
Injecting Intramuscular (IM) - Umjovo ube yisisipha.
I-intraperitoneal (i-IP) - Umjovo emgodini wesisu.
I-Intravenous (IV) - Injection ibe ngumvuthwandaba.
L.D. - I-Lethal dose, eyingozi.
I-Metabolism - Inani lazo zonke izinqubo zomzimba nezamakhemikhali lapho izinto eziphilayo zikhiqizwa khona futhi zigcinwe.
Imithi - Imithi yokwelapha ngokuphambene ne-biological.
I-Serum - Ingxenye yamanzi egazini ngaphandle kwamaseli noma izici zokuvala. I-serum etholakala ezilwaneni ngokuzivikela komzimba othile futhi ijojowe kwabanye abantu ukuze inike umamukeli isilinganiso esithile sokuzivikela emzimbeni eyaziwa ngokuthi i-antiserum
Ukucindezeleka - Zonke izici ezivame ukunikela isilwane sengozini enkulu. Ukucindezeleka kungenzeka kube yendawo, imfucuza, i-psychic noma yomzimba.
I-subclinical - Ngaphandle kokubonakaliswa kwemitholampilo, kusho ngezigaba zokuqala, noma ngesilinganiso esincane, isifo esinikeziwe.
I-Subcutaneous (SQ) - Ngaphansi kwesikhumba.
I-Toxaemia - I-poisoning ejwayelekile ngenxa yokungena kwe-toxin, ngokuvamile imikhiqizo yebhaktheriya eyakhiwe endaweni yesifo. Ngokwezwi, ukubulawa kwegazi.
I-Toxin - Imithi enobuthi.
I-toxoid - I-toxin ephulukisiwe ukuze ichithe isifo sayo kodwa isishiye itholakala ukuthi ikwazi ukuvuselela ukwakhiwa kwama-antibodies uma ijojowe emzimbeni.
I-Trauma - Inxeba noma ukulimala.
Imishanguzo - Imikhiqizo elungiselelwe ngenhloso yokunikeza ingculazi ekhuthele. Amagciwane angenziwa kusuka kumagciwane, amabhaktheriya, noma i-protozoa, noma ephilayo noma ebulawe, noma evela ebuchosheni.
Imishanguzo (Ibhaktheriya) - Umgomo ovikela izifo ezibangelwa amagciwane.
Umgomo (I-Virus Ebulawe) Umgomo owenziwe ngokuthelela isilwane, isisu sombungu noma izicubu zesilwane ngegciwane elithile. Igciwane livunwa ngokuphakama kokutheleleka futhi libhekiswe kuma-agent okubulala. Igciwane elifile livuselela ukukhiqizwa kwama-antibodies lapho ijojelwa esilwaneni.
Umgomo (i-Live Virus) - Umgomo owenziwe ngokukhulisa isiko eliphilayo lesigciwane lapho umgomo ulungele khona.
Umgomo (Ukuguqulwa Live Virus) - Umgomo owenziwe ngegciwane elibhekiswe.
I-vaccine (i-Monovalent) - Umgogodla oveza isifo esisodwa sokuzivikela.
Umgomo (Polyvalent) - Umgomo owenza ukukhukhulwa kwezifo ezimbili noma ngaphezulu.
Umgomo (Viral) - Umgomo ovikela izifo ezibangelwa amagciwane.
Amagciwane - Amaminithi wokutheleleka amancane, amancane kunamabhaktheriya amaningi futhi akwazi ukuphindaphinda kuphela ngeselula ephilayo, engenakwenzeka. Ama-virus angahlala ephila ngezikhathi ezingafani ngaphandle kwezicubu eziphilayo. Amanye ama-virus akhiqiza izifo ezimbi, ezinye azilimazi neze.
Amagama esiLatini neyesiGreki Kanye Nezifinyezo Ezisetshenziselwa Ukubhala
a.c. i-ante cibum - ngayinye
isikhangiso sesikhangiso ku: kuze kufike
isikhangiso lib. I-ad libitum - injabulo
alternis horis alternis horis - zonke ezinye ihora
i-ante ante - ngaphambili
aq. amanzi - amanzi
b.i.d. bis in die - kabili nsuku zonke
bis bis - kabili
c cum - nge
capsula capsula - capsule
gtt gutta (e) - amaconsi
H. Hora - ihora
i-hor. som., H.S. Hla somni - ngesikhathi sokulala
ku-d. efa - nsuku zonke
lin. linimentum - linament
iq. utshwala - isisombululo
okuningi. lotio - lotion
noctis noctis - ebusuku
hhayi non - hhayi
okungewona. non repetatur - ungaphindi
O.D. oculus dexter - iso lesokudla
O.L. i-oculus laevus - iso lesobunxele
konke. noma. Isikhathi ngasinye - ihora
isb. post-cibos - ngemuva kokudla
i-p.r.n. pro re nata - njengoba kudingeka
q.h. isikhathi sehora - njalo ihora
q.i.d. quater in die - izikhathi 4 ngosuku
q.s. i-quantum iyaneliseka - okuningi ngangokunokwenzeka
t.i.d. ter in die - izikhathi ezintathu ngosuku
u-dict. ut dictum - njengoba kuqondiswe